ဟိုက်ဒရိုဂျင်အသက်ရှူခြင်းဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း၊ ကျွန်ုပ်၏စမ်းသပ်မှုရလဒ်များကဘာကိုဆိုလိုသနည်း။ - ကျန်းမာရေးပညာရေး | မေ 2022
ကျန်းမာရေး ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ ကုမ္ပဏီ, ကျန်းမာရေးပညာရေး ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာအချက်အလက် ကုမ္ပဏီ, အဆိုပါကုန်ပစ္စည်း ပြင်းထန်သောအားကစား ကျန်းမာရေးပညာရေး ဆီးဂိမ်း ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ ကနျြးမာရေးပညာရေး, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ ကုမ္ပဏီ, သတင်း ကုမ္ပဏီသတင်း ကုမ္ပဏီ ကုန်ပစ္စည်း ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးအချက်အလက်
အဓိက >> ကျန်းမာရေးပညာရေး >> ဟိုက်ဒရိုဂျင်အသက်ရှုခြင်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးသင်သိထားသင့်သမျှ
၀ မ်းလျှောခြင်း၊ အပူလောင်ခြင်း၊ အစာမကြေခြင်း၊ ဝမ်းနည်းခြင်းအစာအိမ်၊ ၀ မ်းလျှောခြင်း - ဤအစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများသည်စိတ်ဆင်းရဲစရာများစွာဖြစ်စေနိုင်သည်။ နှင့်အညီ, သူတို့ကမကြာခဏလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ပါပဲ။ အားလုံးဒီ tummy ဒုက္ခဖြစ်ပေါ်စေမယ့်အတိအကျဖော်ထုတ်ရန်ခဲယဉ်းနိုင်ပါတယ်။
ဟိုက်ဒရိုဂျင်အသက်ရှုစစ်ဆေးမှုကိုရိုက်ပါ။ ဤသည်ရိုးရှင်းသော, မထိုးဖောက်အကဲဖြတ်ကြောင့်ဘက်တီးရီးယားကြီးထွားသို့မဟုတ်ပဲလွင်ပြင်သောက်ခြင်းကနေရှိမရှိ, သငျသညျသူတို့အားအစာအိမ်ပြicationsနာများခံစားရဘာကြောင့်အတိအကျဆုံးဖြတ်ရန်သင်၏အသက်ရှုအတွက်ဓာတ်ငွေ့အဆင့်ဆင့်တိုင်းတာသည်။
ဟိုက်ဒရိုဂျင်အသက်ရှူခြင်းစမ်းသပ်ခြင်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်။ စစ်ဆေးမှုမတိုင်မီသင်အထူးအစားအစာရှိမည်၊ စစ်ဆေးသည့်နေ့၌ဆရာဝန်၏ရုံးခန်း၌နှစ်နာရီခန့်ကြာပြီးနောက်သင်၏ရလဒ်အတွက်နှစ်ပတ်ခန့်စောင့်ပါလိမ့်မည်။
သင်၏ဆရာဝန်ပေါ် မူတည်၍ ပြင်ဆင်မှုသည်မည်သည့်နေရာမှမဆိုစတင်နိုင်သည် လေးပတ် စာမေးပွဲမတိုင်မီတစ်ရက်ရန်။
တစ်လ မတိုင်မီ , ပantibိဇီဝဆေးများကိုယူပြီးရပ်တန့်နှင့်အူမကြီးကင်ဆာစစ်ဆေးခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။
နှစ်ပတ်မတိုင်မီ , probiotics ယူပြီးကိုရပ်တန့်။
တစ်ပတ်မတိုင်မီ , လျော့နည်းစေသည့်အသုံးပြုမှု, ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းဖြတ်လေ၏။
နှစ်ရက်မတိုင်မီ မည်သည့် prokinetics ယူပြီးရပ်တန့်။
Prokinetics သည်ယေဘုယျအားဖြင့်အက်စစ်ဖူဖူလ်ဆေးသောက်သောဆေးများဖြစ်သည် Reglan , Pepcid နှင့် Nexium motil တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်) သောအလုပ်။ ဆိုလိုသည်မှာသူတို့သည်သင်၏အစာအိမ်တွင်ပါဝင်သောအရာများအချည်းနှီးဖြစ်သောအက်ဆစ်ဓာတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်မည်သည့်အရာကိုမဆိုဖယ်ရှားပေးသည်။ သို့သော်ဟိုက်ဒရိုဂျင်စမ်းသပ်မှုကဖော်ထုတ်ရန်ကြိုးစားနေသည့်ဘက်တီးရီးယားများကိုလည်းဖယ်ထုတ်ပစ်သည်။ လူနာသည်ဘက်တီးရီးယားတိုးပွားမှုရှိမရှိကျွန်ုပ်တို့သိချင်သည် Mackenzie Jarvis , D.M.Sc. တစ်နည်းပြဆရာ Atrium ကျန်းမာရေးအစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းဗေဒ၏ပြည်တွင်းရေးဆေးပညာနှင့်အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းရောဂါဗေဒသူနာပြု။ ဤဆေးများသည်အရာရာကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာရွေ့လျားစေပြီးရှင်းလင်းသောအဖြေမပါဘဲထားခဲ့နိုင်သည်။
တစ်ရက်မတိုင်မီ နိမ့်ကျသောအစားအစာကိုသင်လိုက်နာရမည်။ ၎င်းသည်အမျှင်ဓာတ်၊ ကစီဓါတ်များ၊ သစ်သီး၊ နို့၊ ဒိန်ခဲ၊ ပေါင်မုန့်၊ ရေခဲမုန့်၊ နို့ထွက်ပစ္စည်းများနှင့်ဆိုဒါများကိုရှောင်ရှားရန် Jarvis ကပြောကြားသည်။ သင့်တွင်ကြက်သား၊ ငါး၊ ဥ၊ ရေ၊ ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်နှင့်အဖြူရောင်ပေါင်မုန့်နှင့်ဆန်ဖြူရှိနိုင်ပါသေးသည် (၎င်းတို့သည်အမျှင်ဓာတ်နည်းသောကြောင့်) ။
စမ်းသပ်မှု၏နေ့ ရေမှ လွဲ၍ မည်သည့်အရာကိုမဆိုစားခြင်း၊ မသောက်ခြင်း (အသက်ရှူကြိတ်ခြင်းနှင့်ဝါးသွားဖုံးများပါဝင်သည်) ။
သင့်စစ်ဆေးမှု၏နေ့ရက်ကိုသင်သည်ဆရာဝန်၏ရုံးခန်း၌နှစ်နာရီခန့်အကုန်ခံပါမည်။ ပထမ ဦး စွာသင့်ဆရာဝန်ကသင့်အားသောက်ရန်သကြားဓါတ်ကိုပေးပါလိမ့်မည်။ Jarvis သည်သူမ၏လူနာများကိုဂလူးကို့စ်သောက်စရာနှင့် Mercy Medical Center သည်အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းအထူးကုဆရာဝန်ကိုပေးသည် Bryan Curtin, M.D. , သူ၏လူနာများကိုဂလူးကို့စ်၊ ဂလူးကို့စ်သည်အများဆုံးဖြစ်သည်။
အဖြေကိုသောက်ပြီးနောက်ပထမနာရီအနေဖြင့်၊ သင်သည် ၁၅ မိနစ်လျှင်တစ်ကြိမ်အသက်ရှူစုဆောင်းခြင်းကိရိယာသို့မှုတ်ပါလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်စမ်းသပ်ပြွန်ပါသည့်အိတ်တစ်ခုနှင့်တူသည်။ ဒုတိယနာရီတွင်၊ မိနစ် ၃၀ တိုင်းသင်စက်ထဲသို့ ၀ င်လိမ့်မည်။ Dr. Curtin ကသူ၏လူနာများကိုစစ်ဆေးမှုတစ်လျှောက်လုံးမည်သို့ခံစားနေသည်ကိုဒိုင်ယာရီသိမ်းရန်ပြောပြီးသူတို့၌မည်သည့်ရောဂါလက္ခဏာမဆိုရှိပါသလားဟုမှတ်ချက်ချသည်။ ဤအတောအတွင်းဓာတ်ခွဲခန်းပညာရှင်များသည်သင်ပေးသောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းတိုင်းတွင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့နှင့်မီသိန်းဓာတ်ငွေ့ပမာဏကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလိမ့်မည်။
ဂလူးကို့စ်သည်အူသိမ်ထဲ၌ပြိုကွဲသွားသည်။ အူမကြီးထဲတွင်ဗက်တီးရီးယားမကောင်းလျှင်၎င်းသည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့်မီသိန်းကဲ့သို့ဂလူးကို့စ်မှထွက်ပေါ်လာသောထွက်ပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြေခံအားဖြင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင် (သို့) မီသိန်းဓာတ်တိုးများလာခြင်းရှိမရှိသိရန်လေ့လာမှုကိုဖတ်ခဲ့သည်။ တစ် ဦး သို့မဟုတ်နှစ် ဦး စလုံးအတွက်တိုးရှိပါက, ထိုကုသမှုဆုံးဖြတ်ရန်ပါလိမ့်မယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့်လူနာများသည်သူတို့၏စမ်းသပ်မှုရလဒ်များကိုနှစ်ပတ်ခန့်ကြာသည်။ သင့်ရဲ့အသက်ရှူနေတဲ့နမူနာမှာဟိုက်ဒရိုဂျင် (သို့) မီသိန်းဓာတ်များများများဘယ်လောက်အထိပေါ်လာတယ်ဆိုတာကိုတော့ဆရာဝန်ကရလဒ်တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါလိမ့်မယ်။ Jarvis ၏ရုံးသည်ရလဒ်နမူနာများကိုနှိုင်းယှဉ်။ ပိုမိုလွယ်ကူစွာဖတ်နိုင်ရန်အတွက်ရလဒ်များကိုဂရပ်တစ်ခုထဲသို့စုစည်းထားသည်။
ဒေါက်တာ Curtin အဆိုအရတစ်သန်းသို့မဟုတ်ထို့ထက်ပို။ နှုန်း 20 အစိတ်အပိုင်းများတစ်ဟိုက်ဒရိုဂျင်သို့မဟုတ်မီသိန်းတိုးလာလျှင်, ပြaနာတစ်ခုဆိုလိုသည်။ အကယ်၍ လူနာသည်စမ်းသပ်ကာလအတွင်း ၀ မ်းလျှောရောဂါဖြစ်ပွားလျှင်ဓာတ်ငွေ့တန်ဖိုးမည်မျှပင်ရှိပါစေစစ်ဆေးမှုသည်အပြုသဘောဆောင်သည်ဟုသူကမှတ်ချက်ချသည်။ စမ်းသပ်ကာလအတွင်းရောဂါလက္ခဏာများတစ်ခုတိုး visceral hypersensitivity နေတဲ့အကြောင်းအချက်ပြ။
ဟိုက်ဒရိုဂျင်အသက်ရှုမှုစစ်ဆေးခြင်းသည်အဓိကအားဖြင့် SIBO သို့မဟုတ်အူမကြီးထွားမှုသေးငယ်သောဗက်တီးရီးယားများကြီးထွားမှုကိုစစ်ဆေးရန်အသုံးပြုသည်။ သို့သော်၎င်းသည်အခြားအစာခြေရောဂါများကိုလည်းရှာဖွေဖော်ထုတ်သည်။
ဟိုက်ဒရိုဂျင်အသက်ရှူစစ်ဆေးခြင်းကရောဂါရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်ကူညီနိုင်သည် ယားယံသောအူသိမ်အူမကြီးရောဂါ (IBS) visceral hypersensitivity (သို့မဟုတ်, စူးရှသောဝမ်းဗိုက်နာကျင်မှု - စိတ်တိုလွယ်သောအူသိမ်အူမလက္ခဏာရောဂါလက္ခဏာ) ကိုဖော်ထုတ်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် IBS ကဲ့သို့လက္ခဏာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်အခြားအခြေအနေများအားဖယ်ထုတ်နိုင်ရန်ကူညီသည့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
မကြာသေးမီက Imperial College London မှလေ့လာခြင်း ဟိုက်ဒရိုဂျင်အသက်ရှုစစ်ဆေးခြင်းသည်အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းကင်ဆာကိုလည်းအစောပိုင်းအဆင့်များ၌ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ကြောင်းမကြာသေးမီကတွေ့ရှိခဲ့သည်။
သငျသညျ SIBO, ဒါမှမဟုတ်သေးငယ်တဲ့အူလမ်းကြောင်းဘက်တီးရီးယားကြီးထွားရောဂါရှိသည်ဆိုပါက, သင့်ရဲ့အူ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများအနေဖြင့်ဘက်တီးရီးယားအသေးအူထဲမှာစုဆောင်းစတင်ခဲ့ကြပြီးသူတို့အဲဒီမှာမဖြစ်သင့်ဆိုလိုသည်။
SIBO အတွက်ကုသမှုသည်များသောအားဖြင့်ပicsိဇီဝဆေးများဖြစ်သည် neomycin ဒါမှမဟုတ် သြဂင် ) ။ ကုသမှုခံယူသော်လည်း SIBO သည်အထူးသဖြင့် autoimmune ရောဂါများရှိသောလူနာများအတွက်ပြန်လာနိုင်သည်။ SIBO ကိုတစ်လလျှင်တစ်ကြိမ်လောက်ရနိုင်သည်။
သက်ဆိုင်သော: ပibိဇီဝဆေး 101
IMO (သို့) အူလမ်းကြောင်းမှမက်သာနိုဂျင်အလွန်အကျွံကြီးထွားခြင်းဆိုသည်မှာဝမ်းချုပ်နေစဉ်အတွင်း၌ဘက်တီးရီးယားများဆိုးလာသည်ဟုဆိုလိုသည်။ ၀ မ်းပျက်ဝမ်းလျှောခြင်းအစားဝမ်းချုပ်ခြင်း မှလွဲ၍ သင်သည် SIBO ကဲ့သို့တူညီသောလက္ခဏာများရှိလိမ့်မည်။ ကုသမှုသည်လည်းအလားတူပင်ဖြစ်သည် - ဝမ်းချုပ်ခြင်းအတွက်ကုသမှုအပြင်အထွေထွေပantibိဇီဝဆေးများနှင့်သင့်အူလမ်းကြောင်းအတွက်အထူးဆေးများပါ ၀ င်သည်။
ဤရောဂါလက္ခဏာသည်ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ယေဘုယျအားဖြင့်လူသိများသောသကြားသို့မဟုတ်နို့ထွက်ပစ္စည်းကိုအစာကြေရန်အခက်အခဲရှိသည်ဟုဆိုလိုသည် fructose သည်းမခံ (ကြက်သွန်နီ၊ artichokes၊ သစ်တော်သီးနှင့်ဂျုံတို့တွင်တွေ့ရသောသကြားပါဝင်သည်) သို့မဟုတ် Lactose ကိုသည်းမခံ (နို့ထွက်ပစ္စည်းများတွင်တွေ့ရသောသကြား) ။ တစ်ခါတစ်ရံ malabsorption ဟုခေါ်သောဤရောဂါတွင် SIBO နှင့်အလားတူလက္ခဏာများရှိသည်။
ကံမကောင်းစွာဖြင့်ဤအခြေအနေများသည်ကုသမှုမရှိပါ။ အစား, သင်သည်သင်၏အစားအစာထဲကနေအချို့သောအစားအစာများကိုဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်ရောဂါလက္ခဏာများကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျ Lactose ကိုသည်းမခံလျှင်, အချို့သော Over-the-counter တန်အင်ဇိုင်းထုတ်ကုန်များကဲ့သို့ Lactaid , အဖြစ်ကောင်းစွာကူညီလိမ့်မည်။ အထူးသဖြင့် lactose ကိုကောင်းမွန်စွာအစာမစားနိုင်သောသူများအတွက်သင်သည်ဖြည့်စွက်ဆေးများမှတဆင့်လုံလောက်သောကယ်လ်ဆီယမ်ရရှိသည်ကိုသေချာစေပါ။
မင်းရှိရင် လျင်မြန်စွာသေးငယ်တဲ့အူသိမ်အကူးအပြောင်းအချိန် အစားအစာသည်သင့်အူမကြီးမှတစ်ဆင့်ပုံမှန်ထက်မြန်ဆန်စွာဖြင့်ရွေ့လျားသွားခြင်းကြောင့်ဝမ်းလျှောခြင်း၊ ဝမ်းဗိုက်နာခြင်း၊ သင်၏မြန်ဆန်သောကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအချိန်အကြောင်းရင်းပေါ် မူတည်၍ သင်လုပ်နိုင်သည် ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုကုသပါ ။ ဓာတ်မတည့်ခြင်းများကိုသောက်သုံးပါ။
ဟိုက်ဒရိုဂျင်အသက်ရှုစစ်ဆေးခြင်းသည်တစ်ခါတစ်ရံမှားယွင်းသောအပြုသဘောဆောင်စေနိုင်ပြီး၊ အသုံးပြုသောအလွှာပေါ် မူတည်၍ အထိခိုက်မခံနိုင်သည့်ရည်ရွယ်ချက်များရှိနိုင်သည်။ ထို့အပြင်အချို့ဓာတ်ခွဲခန်းများ ကွဲပြားခြားနားသော parameters တွေကိုသုံးပါ ဓာတ်ငွေ့ပမာဏကိုတိုင်းတာရန် - ကြာချိန်စစ်ဆေးမှုအတွက်မိနစ် ၉၀ လျှင်တစ်မိနစ်တိုင်းတာခြင်းသို့မဟုတ်စမ်းသပ်မှုစတင်ချိန်မှမိနစ် ၃၀ တိုင်း - အသက်ရှုတိုင်းတာခြင်းကဲ့သို့သောရလဒ်များကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ အိမ်တွင်းစမ်းသပ်မှုများသည်ပြင်ဆင်မှုနှင့်ပြင်ဆင်မှုများတွင်အမှားအယွင်းများပိုများလာနိုင်သည်။
ဟိုက်ဒရိုဂျင်အသက်ရှုစစ်ဆေးမှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်သည်သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့်သင်၏အာမခံပေါ် မူတည်၍ ခြားနားသည်။ ငွေသားစျေးနှုန်းသည်ဒေါ်လာ ၁၄၅ မှ ၄၀၀ အထိရှိသည်။ စစ်ဆေးမှုနှင့်သင်လိုအပ်သည့်ဆေးဝါးများပါမပါကိုစစ်ဆေးရန်သင့်အာမခံအစီအစဉ်နှင့်စစ်ဆေးပါ။ သို့မဟုတ်ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရန်သင့်ဆရာ ၀ န်ကိုပြောပါ။
ဟိုက်ဒရိုဂျင်အသက်ရှုစစ်ဆေးခြင်းသည် SIBO နှင့် IMO တို့ကိုရှာဖွေရန်အတွက်အများဆုံးအသုံးပြုရန်ပိုမိုနှစ်သက်သည်။ ပိုမိုစျေးကြီး။ ထိုးဖောက်နိုင်သောအခြားနည်းလမ်းများရှိသေးသည်။ တစ်ခုမှာဆရာဝန်ကသင့်အူမကြီးမှအရည်ကိုစုပ်ယူပေးသောအထက်ပိုင်း endoscopy ပါဝင်သည်။ အခြားတစ် ဦး ကသင်မျိုချလိုက်တဲ့ဆေးတောင့်ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်အူအတွင်းရှိဗက်တီးရီးယားအရေအတွက်ကိုရေတွက်ရန်ဆရာဝန်များအသုံးပြုသောအရည်ကိုစုဆောင်းသည်။
သင်၌ SIBO သို့မဟုတ် IMO ရှိနိုင်သည်ဟုသင်ထင်လျှင်၎င်းသည်သင့်အတွက်စမ်းသပ်မှုမှန်မမှန်သိရန်သင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
သွေးဂလူးကို့စ်အတွက်ပုံမှန်အတိုင်းအတာ mg dl ဆိုတာဘာလဲ
serotonin syndrome ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ။
activated charcoal ကိုသောက်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကားအဘယ်နည်း
၁၂ နာရီအတွင်း planbဘယ်လောက်ထိရောက်မှုရှိလဲ